Famotehana ampahibemaso ireo basy tsy ara-dalàna.
Published Date: 29 avril 2022
📸 Pejy an-tsary 29 Aprily 2022
Famotehana ampahibemaso ireo basy tsy ara-dalàna 1089 sy bala 40 isa teo alohan’ny Lampan’ny tanànan’Antananarivo­, izay notarihan’ny Tafika Malagasy ary nandraisan’ny Ministeran’ny Fitsarana anjara.
Fivoriana niarahan’ny Ministeran’ny Fitsarana tamin’ireo Mpiara-miombon’antok­a sy ireo mpamatsy vola (Partenaires Technique et Financier).
Fivoriana niarahan’ny Ministeran’ny Fitsarana tamin’ireo Mpiara-miombon’antok­a sy ireo mpamatsy vola (Partenaires Technique et Financier) izay natao tao amin’ny Tranombokin’ny Ministeran’ny Fitsarana Faravohitra, notarihan’ny Sekretera Jeneralin’ny Ministera, R/Toa RABY Savatsarah.
✅ Nivory sy nifampidinika tamin’ireo mpiara-miombon’antoka sy ireo mpamatsy vola na PTF ny tompon’andraikitra isan-tsokajiny teto amin’ny Ministeran’ny Fitsarana androany 29 Aprily 2022 mba hampafantatra ny asa sy andraikitr’ireo mpiantsehatra tsirairay eto anivon’ny Ministera, ary koa ireo vinavina tiana ho tanterahana mba hahafahana mahita ny tena azo hanampiana ny Ministera.
➡️ Nandritra ny valan-dresaka tamin’ny mpanao gazety dia nitondra fanazavana ny Sekretera Jeneralin’ny Ministera, R/toa RABY Savatsarah niaraka tamin’ny Tale Jeneralin’ny Raharaham-pitsarana, ny Fandinihana ary ny Fanavaozana (DGAJER), R/toa RANDRIANARISOA RAKOTONDRAJERY Salohy ny anton’ny fivoriana ary ihany koa nanome fanazavana tsotsotra momba ny Sorampiakohonana, momba ilay filazana izay nivoaka amin’ny fandraisana mpiasa vaovao amin’ny alalànan’ny fifaninana hidirana ao amin’ny sekoly mpampiofana ho mpitsara sy mpirakidraharaha na koa ho mpandraharaha ny fonja. Teo ihany koa ny fanamarihana sy fitondrana fanazavana momba ireo raharaha niteraka resabe ao amin’ny tambanjotra sosialy na ilay resaka fanolanana na ilay fanimbana sekoly manarampenitra.
💡 Indro atolotra anao izany valan-dresaka izany.
🔷 I – NY OLONA TSY HITA EO AMIN’NY TOERAM-PONENANY INTSONY NO SADY TSY ANDRENESAM-BAOVAO na « Absent »:
➡️ 1 – Rehefa inona no lazaina fa tsy hita eo amin’ny toeram-ponenany intsony no sady tsy anderesam-baovao ny olona iray na « absent » ?
Lazaina fa tsy hita eo amin’ny toeram-ponenany intsony no sady tsy andrenesam-baovao na « absent » ny olona iray raha toa izy ka tsy hita eo toeram-ponenany intsony izy ary mampisalasala ny fahavelomany noho izy tsy andrenesam-baovao mihitsy.
➡️ 2 – Fotoana voafaritry ny lalàna no ilazana fa tsy hita eo amin’ny toeram-ponenany intsony no sady tsy andrenesam-baovao ny olona iray na « absent »:
👉 Rehefa mihoatra ny iray taona ny vaovao farany azo momba ilay olona tsy hita dia heverina fa tafiditra ao amin’ny sokajin’olona tsy hita eo amin’ny toeram-ponenany intsony no sady tsy andrenesam-baovao izy.
👉 Mihitatra ho efatra taona io fe-potoana io raha toa ka namindra ny fitantanana ny fananany manontolo na amin’ny ampahany amin’ny olona izay nomeny fahefana izy mialoha ny nandehanany.
➡️ 3 – Inona no tokony atao raha toa ka miseho ireo tranga ireo?
👉 Rehefa tapitra ireo fe-potoana voalaza ireo ka mbola tsy niverina na mbola tsy nandrenesam-baovao ihany ilay olona, dia afaka mangataka amin’ny Fitsarana ny vadin’ilay olona tsy hita eo amin’ny toeram-ponenany intsony no tsy nandrenesam-baovao na « absent »,ny mpandova azy, ny fampanoavana, na izay olona mety manana tombontsoa manokana avy amin’izany mba handraisana fepetra vonjimaika hitantanana ny fananan’ilay olona.
👉 Napetraky ny lalàna izany mba ho fiarovana ny fananany eo am-piandrasana ny fiverenany.
➡️ 4- Ny fepetra vonjimaika :
👉 Fanendrena mpitantana vonjimaika iray na maromaro mba hitahiry sy hitantana ny fananan’ilay olona tsy hita eo amin’ny toeram-ponenany intsony no sady tsy andrenesam-baovao na « absent ».
👉 Mety ho olona ao amin’ny fianakaviana ihany izany, mety ho olon-kafa koa anefa.
➡️ 5- Ny mety ho tombotsoa amin’ny handraisana fepetra vonjimaika amin’ny fitantanana sy fikarakarana ny fananan’ilay olona tsy hita :
👉 Samy manana ny tombotsoany ny tsirairay miankina amin’ny zavatra ifandraisany amin’ilay olona tsy hita eo amin’ny toeram-ponenany intsony no sady tsy nandrenesam-baovao.
👉 Mety hoe mpandova an’io olona tsy hita io izy ka mandrapisokatry ny fandovana dia tiany hisy mpitantana sy mpikarakara ilay fananana.
➡️ 6- Fitsarana mahefa :
Fitsarana Ambaratonga Voalohany misy ny toeram-ponenan’ilay olona tsy hita eo amin’ny toeram-ponenany intsony no sady tsy andrenesam-baovao na « absent ».
➡️ 7- Paik’ady arahina eny amin’ny Fitsarana :
👉 Mampiditra taratasy fangatahana eny amin’ny Fitsarana rehefa dila ilay fe-potoana voalaza teny ambony (herintaona na 4 taona) raha toa ka tsy mbola hita ilay olona,
👉 Ny didy avoakan’ny Fitsarana amin’izay fotoana izay dia manambara fa ny olona iray dia heverina ho tsy hita eo amin’ny toeram-ponenany intsony no sady tsy andrenesam-baovao na « présumé absent ».
👉 Io didy io dia manendry ihany koa izay ho mpitantana vonjimaika sy ny fepetra rehetra natao hitantanana sy hikarakarana ny fananan’ilay olona heverina ho tsy eo an-toerana.
👉 Raha toa kosa ka efa maty ny vadiny kanefa tsy mbola ampy taona ny zanak’izy ireo, dia ambara ao anatin’io didy io ihany koa fa misokatra avy hatrany ny fiahiana vonjimaika ny zaza na tutelle provisoire izay manendry olona hihazona ny zaza sy hanana fahefana aminy.
➡️ 8- Anjara andraikitry ny olona izay voatendren’ny Fitsarana ho mpitantana vonjimaika ny fananan’ilay olona iray heverina ho tsy eo :
👉 Vao mandray fitantanana ilay mpitantana vonjimaika dia ny manisa sy mandrakitra an-tsoratra ny fananan’ilay olona tsy eo no tokony ataony voalohany
👉 Tena fitantanana sy fikarakarana ihany no azony atao fa tsy azony atao mihitsy ohatra ny mivarotra ny fananan’olona napetraka hotantanany.
👉 Noho ny antony manokana anefa dia afaka mangataka alalana amin’ny Fitsarana ihany ilay mpitantana vonjimaika hivarotra na hanao antoka (hypothèque) na hanolotra ny fananana amin’olon-kafa rehefa voaporofo ny fisian’ny hamehana.
👉 Koa rehefa mahazo ilay didy navoakan’ny Filohan’ny Fitsarana na « ordonnance » ilay mpitantana vao afaka manao izany
👉 Ohatra : marary mafy ny zanak’ilay olona tsy hita eo amin’ny toeram-ponenany intsony no sady tsy andrenesam-baovao kanefa mila vola farak’izay haingana ny fianakaviana hitsaboana io zanany marary io.
👉 Marihinina fa azo atao ny manolo ilay olona voatendry ho mpitantana vonjimaika raha misy tsy fahaizana mitantana na koa hoe tsy afaka intsony izy noho ny antony manokana ka tsy maintsy angatahana eo anatrehan’ny Fitsarana izany.
➡️ 9- Inona ny zavatra miseho raha tsy mipoitra hatrany ilay olona?
👉 Rehefa dila valo taona ilay fotoana tsy nisehoan’ilay olona teo amin’ny toeram-ponenany no sady tsy nandrenesam-baovao momba azy dia afaka manatona ilay Fitsarana mahefa tetsy ambony indray ireo olona voalaza fa manana tombotsoa amin’izany mba handraisana fanapahan-kevitra farany mahakasika ny fananany izay notantanana vonjimaika.
👉 Aorian’ny fanadihadiana izay ataony dia ambaran’ny Fitsarana mazava amin’izay manomboka eo ny tsy fahitana ilay olona na « déclaration d’absence ».
👉 Io didim-pitsarana io ihany koa dia manome alalana ny mpandova hihazona sy hampiasa tanteraka ny fananan’ilay olona voambara fa tsy hita, araka ny filaharana amin’ny fandovana, ary tsy ambakan’izany ny zon’ny vadiny amin’ny fizarana ny fananana iombonana araka ny sata mifehy ny fanambadian’izy ireo.
➡️ 10- Aorian’ny fivoahan’ny didy manambara ofisialy ny tsy fahitana ilay olona :
👉 Ny ampahan’ny didim-pitsarana dia tsy maintsy atao peta-drindrina eny amin’ny Kaominina sy eny amin’ny toeram-ponenana samihafa an’ilay olona tsy eo,
👉 Tsy maintsy avoaka amin’ny gazety mpiseho isan’andro izay tondroin’ny Fitsarana ihany koa izany ampahan’ny didim-pitsarana izany,
👉 Ireto avy no tokony ho hita ao amin’izany ampahan’ny didim-pitsarana izany : ny anarana, ny fanampin’anarana, ny asa iandreketana, ny toetra na « qualité » sy ny toeram-ponenan’ireo olona mangataka ny hanambaran’ny Fitsarana amin’ny fomba ofisialy fa ny olona iray dia tsy eo amin’ny toeram-ponenany no sady tsy andrenesam-baovao, ny mombamomba ity farany sy ny fotoana nialany teo an-toerana,
👉 Enim-bolana aorian’ny fahavitan’ilay peta-drindrina sy ilay famoahana an-gazety ny ampahan’io didim-pitsarana io dia mangataka amin’ny Filohan’ny Fitsarana namoaka ilay didy indray ireo fianakaviana mba ahafahan’izy ireo hanomboka hihazona sy hampiasa tanteraka ny fananan’ilay olona tsy eo,
👉 Mialoha ny fanombohana izany anefa dia tsy maintsy isàna sy raisina an-tsoratra avokoa ireo fananan’ilay olona tsy eo, izay ataon’ny vadintany na izay olona hafa voatendrin’ny Fitsarana. Atrehin’ny mpandova rehetra io fanisana io
👉 Mitsahatra hatreo ny fitantanan’ilay olona voatendry hitantana sy hikarakara vonjimaika ny fananana ary tsy maintsy manao tatitra izy ireo ao anatin’ny enimbolana mahakasika ny fitantanana izay nataony.
👉 Koa raha misy olona manana zavatra takiana amin’ilay olona tsy eo dia any amin’ireo olona mihazona sy mampiasa tanteraka ny fananany izy no afaka mitaky izany.
👉 Ohatra : Ireo olona manana trosa amin’ilay olona heverina ho tsy hita eo amin’ny toeram-ponenany intsony no sady tsy andrenesam-baovao intsony.
Fitsidiana ara-pomba fanajana
Published Date: 28 avril 2022
⚖️ 🇮🇷 Fitsidiana ara-pomba fanajana
Tonga nanao fitsidihana ara-pomba fanajana sy niarahaba ny Mpitahiry ny tombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana, A/toa RAKOTOZAFY François ny Masoivoho Mpisolo toerana Iranian (chargé d’affaires en pied de la République Islamique d’Iran) eto Madagikara, A/toa Hassan Ali BAKSHI teto Faravohitra.